Buug Cusub: Xigtaysiga Xikmadda. | Laashin iyo Hal-abuur
Buug Cusub: Xigtaysiga Xikmadda.
Buug Cusub: Xigtaysiga Xikmadda
Iyada oo arrintaa ka jawaabaya, ayay bahda Xigasho (xigasho.org) waxa ay dhagax-dhigtay hawl ka soo bilaabantay yagleelidda bog Feysbuugga ah oo lagu faafiyo odhaahyo xikmad ah oo ka soo maaxatay caqliyada lagu majeerto taariikhda aadanaha, bari iyo galbeedba. Weedhahaas waxa loo haltebiyay afka Soomaaliga si qofka Soomaaliga ahi u fahmo, una falkiyo ujeedka odhaah kasta. Hawshu halkaa ayay ka soo bilaabantay horraantii 2015. Bishii Abriil ee isla sannadkaa ayaa ay hawshu u soo gudubtay in a unko degel u gaar ah odhaahyaha ah oo ku biira degellada Internet-ka laga booqdo. Waxa samaysmay xigasho.org. Waxa ay soo gaadhay maanta oo 2016 bilaabmay diyaarinta iyo soosaarista buug cusub oo lagu soo uruuriyay waxqabadkii bahda ee gu’gaa dhawdhaaw.
Buugga XIGTASIGA XIKMADDA waxa aad ka heli kartaa isaga oo u diyaarsan qaab E-Book ah dabarkan: halkan guji